Andramena : Nolavin’ny CITES ny ‘’Business Plan’’ -
AccueilSongandinaAndramena : Nolavin’ny CITES ny ‘’Business Plan’’
Andramena : Nolavin’ny CITES ny ‘’Business Plan’’
11/10/2018 admintriatra Songandina 0
Nivory tany Rosia ny faharoan’ ny volaka oktobra lasa teo ny komity maharitry ny CITES, na ny “fifanarahana ara-barotra iraisam-pirenena mikasika ireo zava-boary sy zava-manan’aina atahorana ho ringana”, nodinihina tamin’izany ilay antsoina hoe « business plan » natolotry ny fanjakana malagasy ahafahana mamarotra ireo tahirin’andramena efa tapaka eto Madagasikara. Tapaka nandritra ny fivorian’ny komity maharitry ny CITES io, fa mbola tsy mahafa-po ary tsy ampy ny fametrahana ireo rafitra ahafahana mamarotra ireo tahirin’andramena. Noho izany dia nahemotra amin’ny fivoriana manaraka, amin’ny volana febroary 2019 indray ny fandinihana ny fanatsarana nangatahan’ny komity. Raha ny vaovao voaray dia nangatahan’ny CITES anatin’ ny ilay « business plan », ny fanatsarana bebe kokoa ny fitantanana ny vola azo, vidin’ireo andramena namidy.Toraka izany ihany koa ny ahafahana manatsara ny politikan’ny tontolo iainana sy ny andramena, amin’ ny alalan’ny vola azo amin’ireo andramena ireo.
Firenena enina no mandrafitra ny fandinihina ny antontan-taratasin’ i Madagasikara manoloana ny raharaha ahafahana mivarotra ireo tahirin’andramena amin’ny alalan’ ilay « business plan », izany dia ahitana ny firenena Soisy, Amerikanina, Sina,Frantsa, Tchad, Congo ary koa ny vondrona eropeanina. Ankoatra izay dia eo ihany koa ireo sehatra maro iraisam-pirenena, tahaka ny Wildlife Conservation Society sy ny l’Environmental Investigation Agency. Noho izany ny fanemorana ny fandinihina ny fanatsarana ilay “Business Plan’’, amin’ny taona ho avy dia andraikitry ny filoham-pirenena sy ny governemanta vaovao. Izy ireo indray izany no hiady hevitra amin’ ny birao maharitry ny CITES, ary hametraka ireo rafitra faritan’ilay ‘’Business Plan’’. Midika izany fa dieny aty amin’ ny fampielezan-kevitra, dia efa tokony ho hita ny programan’asan’ireo kandidà mikasika ny fitantanana ny andramena. Tsy izay ihany fa eo ihany koa ny fanatsarana ny politika fanatsarana ny tontolo iainana eto Madagasikara.
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy omaly 02 Mey ny fivoriana ara-potoanan’ny parlemanta, natao tao amin’ny Antenimieran-doholona etsy Anosy. Fivoriana voalohany atao amin’ity taona 2017 ity izy io, ary maharitra 60 andro. Araka ny efa fantatra moa ...Tohiny
Matahotra « 2e tour » : Hanao an-keriny indray i « putschiste »
Marc Ravalomanana/Mbola Rajaonah : Lasibatr’i Rajoelina sy Ravatomanga